नेपालमा कोरोना खोप कहिले आउँछ ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
नेपालमा कोरोना खोप कहिले आउँछ ?
धरानः भारतले दुईवटा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिएसँगै नेपालमा पनि छिट्टै खोप उपलब्ध हुनसक्ने आशा पलाएसँगै नेपालमा कहिले र कस्तो खोप आइपुग्दा भन्ने चिन्ता र बहस अहिले पनि जारी छ । भारतमा केही दिनबाट सर्वसाधारणलाई समेत खोप दिन थालिनेछ ।
भारतमा रहेको विश्वकै ठूला मध्येको एक खोप निर्माण गर्ने केन्द्रमा कोभिड–१९ को खोप उत्पादन भएर भारतभर वितरण हुँदा त्यो नेपालसम्म ल्याउन अझ बढी सहज अवश्य नै हुन्छ । गत आइतबार भारतको औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको ‘कोभिसिल्ड’ र भारत बायोटेक र भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको ‘कोभ्याक्सिन’लाई स्वीकृति दिएको छ ।
नेपालका लागि कुन खोप सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ हालसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भए जस्तो देखिन्न । मोडर्ना, फाइजर, बयोएनटेक, एस्ट्राजेनेका–अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रुस र चीन आदिले निर्माण गरेका खोपहरु विभिन्न देशमा अनुमति प्राप्त गर्दै प्रयोगमा आउन थालिसकेका छन् । तर, यी खोपहरुमध्ये नेपालका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा भने बहस जारी नै छ ।
यसैबीच कोरोना भ्याक्सिनका लागि नेपालले औपचारिक प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । यससँगै नेपालले पनि भारतसँग औपचारिक छलफल नै थालेको छ । त्यसका लागि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले भारतीय अधिकारीसँग छलफल कार्य अगाडि बढाएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि खोपका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमण सिंहले पहिलो चरणमा खोप दिनेगरी विवरण संकलनको काम थालिएको बताए ।
‘पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिइनेछ । त्यसका लागि देशभर रहेका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा महिला स्वास्थ्य स्वय सेविकाहरूको विवरण जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउन भनेका छौं ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपाल प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियाका अगाडि बढेको जानकारी दिए । कोभ्याक्स कम्पनीले नेपाललाई ६० लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यो आउन समय लाग्ने प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
यो विषयमा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा खोप कम्पनीहरूसँग भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष वार्ता पनि भइरहेको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । अब नेपालले पनि चाँडै खोप पाउने उनको भनाइ छ ।